Musiibada Dhaawcyada Real Madrid Oo Sii Cakirantay Iyo Los Blancos Oo Warbixin Caafimaad Ka Soo Saartay Xaalada Thibaut Courtois. – Cadalool.com
Real Madrid ayaa shaacisay in goolhayaha kowaad ee kooxdeeda ee Thibaut Courtois uu dhaawac soo gaadhay waxayna arintani sii xumaysay xaaladii dhaawacyada ee Santiago Solari ku soo haysatay Bernabeu. Goolhaye Thibaut Courtois ayuu dhaawac muruqa ahi soo gaadhay wuxuuna ku biiray miiska daawaynta Los Blancos.
Thibaut Courtois ayaa ku biiray xidigaha kala ah Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio, Marcos Llorente iyo Mariano Diaz oo dhamaantood miiska daawaynta Real Madrid ku sugan kadib dhaawacyo kala duwan oo soo gaadhay xiliyadii la soo dhaafay.
Warbixinta caafimaad ee Real Madrid ayaa lagu cadeeyay in Thibaut Courtois uu soo gaadhay dhaawac heerka kowaad ah oo ka soo gaadhay muruqa lugtiisa bidix ah laakiin Madrid ayaan wax faah faahin ah ka bixin muddada uu maqnaan karo.
Laakiin marka la qiimeeyay nooca dhaawac ay Real Madrid sheegtay in laga daaweeyay Courtois, waxaa suurtogal ah in uu muddo laba todobaad ah garoomada ka maqnaan doono taas oo la micno ah in Keylor Navas uu heli doono fursado uu shaxda Solari ugu soo bilaaban doono muddada uu maqan yahay Courtois.
Warbixinta caafimaad ee Real Madrid ka soo saartay dhaawac Courtois ayaa lagu yidhi: “Kadib baadhitaano lagu sameeyay ciyaartoygeena Thibaut Courtois oo uu adeega caafimaadka Real Madrid maanta fulayay, waxaa isaga laga daaweeyay dhaawac heerka labaad ah oo ka soo gaadhay muruqa lugta bidix, soo kabsashadiisa ayaa sii socon doonta waana la qiimayn doonaa”.
Ugu horayn goolhaye Thibaut Courtois ayaa seegaya kulanka caawa ee ay Real Madrid soo dhawanayso kooxda Leganes ee lugta hore ee Copa Del Rey waxa kale oo uu Coutois seegi doonaa kulanka muhiimka ah ee ay Real Madrid la ciyaari doonto kooxda Real Betis.
Waxa kale oo uu Courtois seegi doonaa kulanka lugta labaad ee Copa Del Rey ee ay Madrid booqan doonto kooxda Leganes iyada oo la filayo in kulanka Sevilla ee January 19 uu shaki wayni ku jiri doono haddii uu taam buuxa u noqon doono iyo haddii kale.